Zavatra tokony ho fantatrao momba ny asa ao Dubai | Theresa R. Fianko
Moa i Dubai ve Ilay Tanjona Tsara ho An'ny Tanora?
navoakan'ny Dubai City Company at Jona 7, 2019
Zavatra tokony ho fantatrao momba ny fiasana ao amin'ny asa Dubai
Dubai dia tanàna kosmopolitan sy marani-tsaina malaza noho ny antony marobe toy ny hoe a raharaham-barotra, habaka ara-barotra sy fizahan-tany. Miaraka amin'ny 85% amin'ny 3 tapitrisa tombanana ho an'ny mponina an-tanindrazana, ny tanàna maoderina dia nahita olona avy amin'ny faritra rehetra miaina mifindra monina sy miasa eto. Betsaka ny antony mahatonga an'i Dubai tsy handray ny mpizahatany fotsiny fa fialofana milamina amin'ny mponina.
Ny andrim-panjakana sy ny rafitra tsy miankina dia fehezin'ny lalàna izay miasa ao Dubai, ka izay sehatra izay hitanao ny tenanao dia tokony ho fantatrao sy hahafantatra ny zonao alohan'ny fanekena ny tolotra asa. Tsy dia malaza eto ny vondrona mpiasa, na izany aza Emira Arabo Mitambatra Ny lalàna mifehy ny asa dia mikarakara ny lafiny rehetra amin'ny sehatry ny asa mba ahafahan'izy ireo miasa amin'ny tontolo milamina sy azo antoka ary salama.
Ny rafitra politika dia mifototra amin'ny Lalàm-panorenana UAE
Instagram amin'ny credit: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
Misy andrim-panjakana eo amin'ny sehatry ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina tsirairay, izay manome antoka fa ny olana momba ny asa dia miasa amim-pahombiazana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Andraikitr'ireo antoko roa ireo ny miantoka fa ny dingana mety dia arahin'ny fehezan-dalàna sy ny tombontsoa. Raha vantany vao vita izany, ny lalàna dia manome fepetra ho an'ny antoko mpihetraketraka amin'ny trangan-javatra mitranga mandritra ny ora na aorian'ny asa. Ao amin'ny tranonkala www.uaelaborlaw.com, dia hahita vaovao momba ny tombontsoa sy ny fandrisihana, ny ora fiasàna, ny fanovana ary ny fialantsasatra ary ny zon'ny mpampiasa sy ny mpiasa rehetra.
Raha vao vaovao ianao any Dubai na miova asa, ataovy azo antoka ny mamaky sy mahafantatra ny lalàna momba ny asa. Fantaro ireo lalàna ireo ary ampidiro amin'ny dingana fampiharana azy ireo mialoha, mandritra sy aorian'ny asa amin'ny fikambanana voafidy anao. Raha tianao ny hanazava fanazavana bebe kokoa amin'ireo fepetra mety tsy hazava aminao, dia manorata any amin'ireo toeram-piasan'ny laboratoara ary hisy solontena iray hanampy anao.
Nanazava ny Rafi-bola momba ny hetra
Dubai dia manome fidiram-bola tsy tapaka ho an'ny tsirairay miasa amin'ny karama manokana. Io no iray amin'ireo antony nahasarika mpitsoa-ponenana avy any amin'ny firenena rehetra manerantany ho any an-tanàna. Mandao ny tanindrazany ny olona mba hahazoana fiainana tsara kokoa ho an'ny tenany sy ny fianakaviany. Ny hevitra hoe tsy manana mandoa hetra Ny fidiram-bolan'ny tsirairay dia fanampiana ho an'ny mpiasa any Dubai. Ny fomba fiainanao dia safidy, amin'izay dia azonao atao ny manapa-kevitra amin'ny fomba tianao hipetrahana amin'ny vola miditra aminao. Na izany aza, fantatrao tsara fa na inona na inona vola azonao dia tonga aminao feno nefa tsy misy asaina haba. Ho an'ireo olona izay tia ny famonjena, miasa ao Dubai dia hanome anao fahafahana.
Raha misy antso an-tariby natao ho an'ny firenena avy amin'ny firenena rehetra eto Dubai, dia hahita solontena ho an'ny tsirairay ianao! Toy izany ny fahasamihafana amin'ny mpiasa any Dubai sy ny UAE. Ho an'ny olona mikaroka traikefa amin'ny sehatra maro samihafa sy manara-penitra, nisafidy ny tanàna tsara ianao. Tsy dia mahazatra loatra ny mahita toeram-piasana miaraka amin'ny olona avy amin'ny firenena iray manokana raha toa ka azo atao izany.
Ny mahazatra indrindra dia ny fahafahanao mizara ny tontolo iainana miasa miaraka amin'ny mpiara-monina avy amin'ny kaontinanta samihafa sy firenena. Ny hakanton'izany dia ny fahafahan'izy ireo miara-miasa amin'ny ekipa mifanaraka amin'ny zava-bita sy ny tetik'asa. Hianatra momba ny kolontsaina sy ny fomban-toetra ary ny fomba amam-panao amin'ny ankapobeny avy amin'ny firenena samihafa ianao. Ny ankamaroan'ny fikambanana dia mandamina hetsika nentim-paharazana izay ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa manararaotra ny fifandraisana ary maneho kolotsaina manankarena avy any amin'ny firenena tsirairay avy.
Ny tahan'ny heloka bevava an'i Dubai
Dubai dia iray amin'ireo tanàna azo antoka, raha oharina amin'ny vidin'ny heloka bevava. Ny sampandraharaham-piarovana eto dia mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny mponina sy ny mpizaha tany. Raha ny lojika dia tokony ho fantatry ny olona ny fiarovany ny tenany na aiza na aiza misy azy eto amin'izao tontolo izao fa zava-dehibe ny mahafantatra fa monina ao amin'ny tanàna iray misy olana ara-pahasalamana ary omena ny ezaka foana ny fanatsarana ny fiarovana.
Betsaka ny asa any Dubai izay mitaky ny fiasana na tara ny fihodinana, ary ny fahafantarana fa azo antoka ny tanàna iray toerana dia hamela anao handeha amin'ny asanao mahazatra fa tsy manahy be loatra. Ny hoe tanànan'ny fiarovana dia midika koa fa hitombo ny fahatokisan-tena hitaizana ny fianakaviana eto. Betsaka ny fotodrafitrasa sy fotodrafitrasa mahatonga an'i Dubai ho toerana ipetrahanao, miasa sy hijanonana amin'ny fianakavianao. Noho izany, raha mieritreritra ny hifindra monina amin'ny fianakavianao any Dubai ianao dia tsy misy antony marobe hanaovana izany.
Sary: Instagram Instagram
Famaranana tao Dubai
Dubai no foibe ara-barotra sy varotra ara-barotra any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana, noho izany ny ankamaroan'ny orinasam-pirenena dia manana foibe na manana sampana ao an-tanàna. Ny teny arabo sy anglisy no tena tiana horesahina eto. Miasa sy monina any Dubai hanome anao fanatanjahantena hentitra sy fanararaotana ilainao mba hifaninana eo amin'ny sehatr'asa manerantany. Ny fiasana any Dubai dia hamita anao amin'ny matihanina sy ny etika ilaina tManosika ny asanao ho amin'ny manaraka. Ny ankamaroan'ny olona dia nampiasa an'i Dubai ho toy ny vato misakana ny fifindra-monina any amin'ny firenena hafa amin'ny safidiny, satria mora kokoa amin'ny mponina ny miaina na miasa eto. Miaraka amin'ny fanerena iraisam-pirenena, mora kokoa ny miasa any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao.
Tany tsy manam-petra fotoana, i Dubai dia mbola mijanona ho toerana fananganana mpiasan'ny nofy. Betsaka ny tombontsoan'ny asa miaraka amin'ny tetik'asa fananganana mitohy, fizahan-tany, fandraisana olona, ​​teknolojia ary maro hafa. Miaraka amin'ny Expo2020 manodidina ny zoron-trano sisa, Feno fahafaham-po ho an'ny fandefasana ny asa nofinanao any Dubai. Ny UAE manontolo dia firenena mandefitra izay mamporisika ny fahasamihafana ka noho izany dia afaka mahita olona avy amin'ny fivavahana rehetra eto ianao, manana toeram-pivavahana.
Ho an'ireo izay mahaliana amin'ny sehatry ny asa aman-jery dia tsy tavela ianao. manao orinasa any Dubai Noraisina mora tokoa tamin'ny alàlan'ny hetsika isan-karazany nataon'ny governemanta mba hampirisihana ny fandraisana anjara amin'ny sehatra tsy miankina sy ny vahoaka amin'ny hetsika mpandraharaha. Hita izany amin'ny isan'ireo mpampiasa vola miasa any Dubai ary koa ny orinasa an-toerana sy ny vazaha dia miroborobo sy mamony. Ny fotodrafitrasa dia tsara indrindra, ary amin'ny maha-habaka fiaramanidina lehibe, ny toeran'ny tanàna dia misy stratejika mba hanamorana ny fivezivezena eran-tany. Ny kalitao fiainana dia tsara ary ny trano fialam-boly dia mora hita.
Dubai City Company manome tsara izao mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Jobs in Dubai Guides. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo toro-hevitra sy toro-hevitra ary asa any United Arab Arab ianao izao Emirates amin'ny fiteninao.